Ingiriiska oo sharci cusub ka soo saaraya magengelyo doonka ah. | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Ingiriiska oo sharci cusub ka soo saaraya magengelyo doonka ah.
Ingiriiska oo sharci cusub ka soo saaraya magengelyo doonka ah.
Arintaas ayaa se ku kaliftay maamulada dhulalkaa hoos yimaada Ingiriiska in ay qoraal ay kaga codsanayaan faahfaahin dheeraad ah u diraan xukuumadda Ingiriiska.
Warqad uu badhsaabka Gibraltar u diray Priti Patel ayuu ku yidhi “arintan la iga lama hadlin la iga lamana tashanin”.
Wageyska Daily Mail ayaa ku waramay in ay ka mid yihiin waxa ka bedelkan xeerarka socdaalka in magangelyada loo diido dadka ka imanaya wadamada Ingiriisku u aqoonsan yahay kuwo “nabdoon”.
Mar hadii uu Brexit si buuxda u dhaqan galayna Ingiriisku kama mid ahaanayo heshiiska Dublin ee Midowga Yurub ee u sahlaya dalalka xubnaha ka ah in ay dadka magangelyo doonka ah ku celiyaan wadamadii hore ee ay Midowga Yurub ka soo galeen inta go’aan laga gaadhayo codsigooda.
Marka hore ba Ingiriisku heshiiskaa wuu diidanaa oo dhawr goor ayuu codsaday in wax laga bedelo intii aanu ka bixin Midowga Yurub.
Midowga Yurub qudhiisa ayaa mar hore iyaguna ka wada hadlay sida ay suurto gal u noqon karto in goobo lagu hayo dadka magangelyo doonka ah looga samayn lahaa woqooyiga Afrika.
Australia ayaa se iyadu tan iyo sideetameeyadii qarnigii hore waxay xarumo ay dadka magangelyo doonka ah ku hayso inta go’aan laga gaadhayo codsigooda ka samaysay dalka dibadiisa.